गैरआवासीय नेपाली संघको स्वास्थ्य समितिद्वारा अभिमुखीकरण तालिम आयोजना - चारदिशा
गैरआवासीय नेपाली संघको स्वास्थ्य समितिद्वारा अभिमुखीकरण तालिम आयोजना
January 10, 2021 चारदिशा देश,यूरोप
लन्डन (जीएनएन) — कोभिड-१९ संगै प्रवासमा रहेका नेपालीहरुमा आत्महत्याका घटनाहरु बढ्दै जाँदा गैरआवासीय नेपाली संघको स्वास्थ्य समितिले एक अभिमुखीकरण तालिम आयोजना गरेको छ ।
विश्वव्यापी मृत्युको १५ औं कारकमा सुचिकृत आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि समाजका अगुवाहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भुमिकाबारे आधारभुत प्रशिक्षण विषयगतविज्ञ चिकित्सकहरुले सहजीकरण गरेका थिए। उक्त तालिममा मध्यपुर्वका कतार, युएई, साउदी अरब, ओमान लगायत मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, युके लगायत विश्वका श्रम गन्तव्य मुलुकहरुबाट नेपालीहरुले सहभागिता जनाएका थिए । जापानमा कार्यरत मनोचिकित्सक डा. विजय ज्ञवाली तथा नेपालमा कार्यरत डा. रन्जन थापाले नेपालबाट झन्डै चार घन्टा भर्चुअल विधिबाट प्रशिक्षण दिएका थिए ।
एनआरएनए स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. संजीव सापकोटाले कोभिड-१९ का कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या देखिएको र आत्महत्याका घटनाहरु पनि बढेकाले संघले यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु गरेको बताए। उनले यो प्रशिक्षण जारी नै रहेको र प्रशिक्षण लिन इच्छुक व्यक्तिहरुले suicideprevention@nrna.org मा इमेल पठाएर सम्पर्क गर्न सुझाव दिए।
गत एक वर्षमा नेपाल बाहिर कम्तीमा १० जना नेपालीहरुले आत्महत्या गरेको आफुहरुलाई जानकारी आएको समितिले जनाएको छ।
नेपालमा थपिए २५९ कोरोना संक्रमित